Wafdi Wasiiro ka socda DF Somalia oo Habeenkii 2aad ku baryay Kismayo Airport – SBC
Wafdi Wasiiro ka socda DF Somalia oo Habeenkii 2aad ku baryay Kismayo Airport
Habeenkii labaad Garoonka diyaaradaha Magaalada Kismaayo waxaa baryay wafdi uu horkacayo wasiirka Difaaca Soomaaliya C/xakiin Fiqi uuna ka mid yahay wasiirka Warfaafinta Dowlada FEderaalka ah ee SOomaaliya.
Wafdigan ayaa 2 maalin ka hor tagay Garoonka diyaaradaha Kismaayo iyagoo ka socdy dowlada federaalka Soomaaliya kana amba baxay magaalada Muqdisho xarunta dalka.
waxay wafdigan halkaasi u tageen sidii ay kulamo ula qaadan lahaayeen madaxda cusub ee maamulka Jubaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi Kismaayo.
Taasi uma suurto galin wafdigan, maxaayeelay waxaa loo diiday in ay gudaha u galaan magaalada iyagoo ilaa tagitaankoodii kismaayo ku xaniban garoonka diyaaraha ka dib amaro ay soo saareen Masuuliyiinta sar sare ee maamulka Jubaland kuwaas oo ka mamnuucaya inay magaalada cagta soo dhigaan.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa Gen C/laahi Fartaag ayaa saxaafada u sheegay in amar ay bixiyeen ugu sheegene wasiirada ku sugan Garoonka Kismaayo inay dib ugalaabtaan oo aysan u ogoleen in ay gudaha magaalada soo galaan.
Gen C/laahi Ismaaciil Fartaag Madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa isagu sheegay maalin nimadii shalay in ay ugu baaqayaan wafdigani in ay isaga noqdaan magaalada kismaayo, islamarkaana maamulkiisu aanu ka warheynin wafdigan ujeedka ay ka leeyihiin magaalada.
Sikastaba ha ahaatee maamulka Jubaland ayaa ku dhawaaqay in wafdi aanay ogeyn ujeedka ay u socdaan islamarkaana aan lala soo socodsiinin maamulkoodu aanu soo gali karin magaalada Kismaayo amarna ay ku bixiyeen hadii ay soogaaraan Garoonka diyaaradaha dib looga celiyo.